Wasiirka Daakhiliga oo si adag ugu hanjabay in Talaabo laga qaadi doono ururada ammaanka waxyeelaya | FooreNews
Home wararka Wasiirka Daakhiliga oo si adag ugu hanjabay in Talaabo laga qaadi doono ururada ammaanka waxyeelaya
Wasiirka Daakhiliga oo si adag ugu hanjabay in Talaabo laga qaadi doono ururada ammaanka waxyeelaya
fooreApr 23, 2012wararka0
Hargeysa (Foore) – Wasiirka Wasaaradda Daakhiliga Md. Maxamed Nuur Carraale (Duur) ayaa uga digay ururadda siyaasadda ee ku hadhay qiimaytii Gudida diiwaan gelintu ay ku kala shaandheeyeen 15-kii urur siyaasadeed ee hore isu diiwaan-geliyay.
Wasiirka Daakhiligu wuxuu sidaasi ku sheegay shir jaraa’id oo uu maanta ku qabtay xafiiskiisa waxaanu yidhi “Qofka aan qarankaba ku kalsoonayn garsoorka ku kalsoonayn ee aan guddi ku kalsoonayn, sharciga ku kalsoonayn isagu ha qanco, intaa qofka aan ku kalsoonayn ee aan intaaba aaminsanayn, isagu tallaabada uu qaadayo xor buu yahay, waayo ninka maanta leh Somaliland dawladi ma jirto waxa la tusayaa oo kaliya in ay dawlad jirto oo kala dambayni jirto oo maamul jiro.”
Md. Maxamed Nuur Caraalle Duur oo hadalkiisa sii watay wuxuu sheegay inay dadka dawladnimadda dafirayaan ay tusi doonaan inay dawlad iyo kala dambayni jirto waxaanu yidhi “Ma banaana xoog ayaan urur ku samaynsanayaa oo sharciga ayaan baal-marayaa, ma banaana buuq iyo qalalaase, ma banaana in nabadda ummadani haysto laga burburiyo. anagu intaas ayaanu ilaalinaynaa.”
“Waxaan cadaynaynaa dhici mayso in ummada qas la geliyo, waayo horaan u idhi Somaliland labaatankaa sannadood. awoodda ummadday ku jirtaa, ciidamo amniga dhawrana way leedahay Somaliland qof sidii quraarad yar oo jabaysa qof uu gacantiisa ku burburiyo,”ayuu yidhi Wasiirka Daakhiligu.
Wasiirku wuxuu mahad- naq u jeediyaey ururadda hadhay ee hadana ku qancay natiijadii gudida diiwaangelinta kuwaas oo uu ku tilmaamay inay sharci dhowr yihiin isla markaana ay ka turjumayaan bulshada Somaliland oo iyadu ah midda ilaashata amnigeeda iyo deganaanshaheeda.
Previous PostGuddoomiyaha Xisbiga UCID oo kulan la yeeshay Madaxweynaha TFG-da Somalia Next Post Ururka Badbaado oo oo shegay inuu kasoo horjeedo mudaharaad la sameeyo